EU-Ethiopia diplomatic feud intensifies over Tigray criticism – Kichuu
HomeNewsAfricaEU-Ethiopia diplomatic feud intensifies over Tigray criticism
(euractiv)–Ethiopian diplomats have stoked a growing diplomatic feud with the European Union after the bloc’s foreign affairs chief, Josep Borrell, and his envoy, Finland’s Pekka Haavisto, harshly criticised the government’s handling of the conflict in the northern Tigray province.
Kaadhimamtoota dhuunfaa tahanii kanneen galmaa’an hedduun ajajaa fi kadhannaa Abiy Ahmediin dha. Namootni hedduun harkuma mirgaa PPti. Isaanis murtii PP Paarlamaa keessatti hin morman. Garuu addunyaa biratti sagaleen adda addaa paarlamaa keessa jira jedhama. Iccitiin dabalataa hanna sagaleeti. Filannoo keessatti tooftaa ittiin sagaleen ittiin hatamuu fi qisaasamu keessaa inni guddaan tokko kana. Bakka paartii dogomaa cimaan jirutti kaadhimamaa dhuunfaa dhiyeessuun sagalee argate gurgura. Kanaanis bakka sanatti PPn akka injifatetti gabaafama. Kun hundi shiraa fi hatna tahuun ifa. Filannoo dharaa, shiraafi fakkeessaa keessatti hin hirmaannu kan jennu keessa isaa beekna. Kan filannus tokkicha. Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaati. Kanaaf hunduu tumsuu qaba.